सेलेब्रिटीलाई प्रश्न : मागी विवाह ठीक कि प्रेमविवाह ? - Naya Patrika
सेलेब्रिटीलाई प्रश्न : मागी विवाह ठीक कि प्रेमविवाह ?
मागीविवाह गर्दा आफ्नो परिवारले केटाकेटी वा उसको परिवारलाई हेर्न पाउँछ । त्यसमा सबैजनाको निर्णय हुन्छ । प्रेमविवाहमा एकजनाले रोज्ने हुन्छ भने मागीविवाहमा चाहिँ परिवारका सदस्यले निर्णय गर्ने हुनाले यो भरपर्दो हुन्छ जस्तो लाग्छ । त्यसैले म पनि मागीविवाह नै गर्छु ।
विदेशीसँग विवाह गर्ने बलिउड अभिनेत्री
जसले पहिलोपल्ट ग्ल्यामर ब्युटी स्कुल सञ्चालन गरिन्
बेसीशहरमा मिस्टर एण्ड मिस लमजुङ २०१८ हुँदै
मन्त्रिपरिषद्को बैठक : टेलिकमकी महानिर्देशक कामिनी राज भण्डारी बर्खास्तीमा